आगामी २० चलचित्र, जसको नाममै छ केही खास
Fri, Jul 20, 2018 | 07:08:44 NST
13:35 PM ( 8 months ago )
काठमाडौं, कात्तिक २४ – मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्र ‘कागजपत्र’को आधिकारिक घोषणा गरिएको छ । चलचित्रको नाम सुन्ने बित्तिकै यसको कथा के होला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ ।
अपिल बिस्टको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको ‘कागजपत्र’लाई पूर्णरुपमा व्यापारीक चलचित्र भएको बताइएको छ । कमेडी विधामा बन्न लागेको चलचित्रमा प्रेम र सामाजिक व्यङ्ग्यलाई मुख्य विषय बनाइने छ ।
कात्तिक २३ देखि छायाकंनमा जाने यस चलचित्रलाई वल्र्ड वाइड फिल्म डिस्ट्रीब्युशन प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो । चलचित्रमा भोलाराज सापकोटा, शिल्पा मास्के, नाजिर हुसैन, आर्जेश रेग्मी, नीरज सिंह बिस्ट लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहनेछ । चाखलाग्दो नाम ‘कागजपत्र’को आधिकारिक घोषणा भएको यो प्रसंगमा आज हामी अलि फरक धारका अर्थात् अलि चाखलाग्दा नाम राखेर निर्माण भएका आगामी सिनेमाहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
मंसिर १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको सिनेमा ‘झ्यानाकुटी’को नाम दर्शकले रुचाएका छन् । सिनेमाको नामलाई दर्शकले रुचाएको देख्दा सिनेमाले कारोबारमा पनि राम्रो गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर नामका आधारमा सिनेमाको सफलता नाप्न भने सकिन्न । निशा अधिकारीको निर्माण र सिमोस सुनुवारको निर्देशन रहेको यो सिनेमामा बेनिशा हमाल र सौगात मल्लको मुख्य भूमिका छ ।
मह सञ्चारको प्रस्तुती तथा किरण केसीको निर्माण रहेको सिनेमा ‘शत्रु गते’ नाम आफैमा चाखलाग्दो मात्रै छैन अनौठो पनि छ । प्रदीप भट्टराईको निर्देशन रहेको यो सिनेमाको नाम सुन्दा सिनेमाको कथा के होला ? भन्ने अड्कल लगाउन अलि मुश्किल पर्छ । निर्माण पक्षले पनि यो सिनेमाको कथा अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । तर हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठको चर्चित टेलिसिरियल ‘१५ गते’को कथासँग यस सिनेमाको कथा प्लस माइनस भएको बुझिएको छ ।
शेरबहादुर नामले दर्शकलाई कन्फ्युज बनाएको छ । नामका आधारमा आम दर्शकलाई ‘शेरबहादुर’ कतै राजनीतिक सिनेमा त हैन भन्ने भएको छ । तर वास्तवमा शेरबहादुरको कथा कुन विषयमा आधारित छ त्यो कुरा भने निर्माताहरुले गोप्य राखेका छन् ।
आर राजवंशीको निर्देशनमा तयार भएको यो सिनेमा माघ १९ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । नाम ‘शेरबहादुर’ र प्रदर्शन मिति माघ १९ गते तोक्नु झन् कौतुहलताको बिषय बनेको छ । किनकी नेपाली राजनीतिमा माघ १९ चर्चित दिन हो । ५९ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।
दलहरुले माघ १९ लाई ‘शाहि कु’ भएको कालो दिन भन्ने गरेका छन् । तर सिनेमा ‘शेरबहादुर’को यो दिनसँग के सम्बन्ध छ ? त्यो भने माघ १९ पछि नै थाहा हुनेछ । सिनेमामा सुनिल थापा, मेनुका प्रधान, रबिन्द्र झा, जान्बी बोहोरा लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ ।
अभिनेत्री केकी अधिकारीले पनि चाखलाग्दो नामबाट सिनेमा निर्माणको थालनी गरेकी छिन् । उनको पहिलो निर्माण सिनेमा ‘कोहलपूर एक्सप्रेस’ यतिबेला बाँकेमा छायाकंन भइरहेको छ ।
‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ नाम सहजै सम्झन सकिने नाम छ । सिनेमाको नाम सुन्दा आम मानिसको दिमागमा यातायातको चित्र बन्छ । तर यो सिनेमा भित्र कथा के होला ? त्यसको रहस्य भने अहिले नै खुलेको छैन । सिनेमामा केकीका अलावा प्रियंका कार्की र ऋचा शर्मा पनि मुख्य भूमिकामा छन् । सिनेमालाई विशाल भण्डारीले निर्देशन गरिरहेका छन् ।
सामान्यतया राजा र रानी सँगै आउने गर्छ । तर केकी अधिकारी र नाजिर हुसैनलाई मुख्य भूमिकामा राखेर निर्माता रमेश एम के पौड्यालले सिनेमा ‘रज्जा रानी’निर्माण गरे जुन नाम चाखलाग्दो छ । यम थापाको निर्देशन रहेको यो सिनेमा प्रदर्शनको लागि तयार भइसकेको छ ।
इन्टु मिन्टु लण्डनमा
फरक नामका कारण निर्माण अघि नै चर्चामा आएको अर्को सिनेमा हो ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ । साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका रहने यो सिनेमाको धेरैजसो छायाकंन लण्डनमा गरिने भएको छ । सिनेमाको छायाकंनका लागि लण्डन जान लागेकी साम्राज्ञी भिसा नपाएका कारण जान नपाएको प्रसंगले पनि केही समय अघि खुबै चर्चा पाएको थियो ।
प्रदीप खड्का मुख्य भूमिकामा रहेको आगामी सिनेमाको नाम पनि अलि फरक छ ‘लिली बिली’ । यो सिनेमा नामसँगै प्रदीपले लिएको पारिश्रमिकका कारण निर्माण अघि नै चर्चामा आयो । प्रदीपले यस सिनेमामा काम गरेबापत २२ लाख पारिश्रमिक लिएका छन् ।
मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्न लागेको यो सिनेमाको छायाकंन स्कटल्याण्ड र बेलायतमा गरिने भएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा बन्न लागेको ‘लिली बिली’मा जसिता गुरुङ र रेभिता गुरुङ मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा छन् । यहि सिनेमाको प्रेस मिटका बेला प्रदिप विदेशी गार्ड सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सिनेपत्रकार हरुबीच ठूलै चर्चा र प्रदिपको आलोचना पनि भएको थियो ।
निर्देशक पुरन थापाको निर्देशनमा सिनेमा ‘फेरि फेरि’ निर्माण हुन लागेको छ । यस अघि पिरिम परया छन्, कान्छी मट्याङ ट्याङ जस्ता उटपट्याङ नामका सिनेमा निर्देशन गरिसकेका पुरनले तेस्रो सिनेमाको नाम पनि चाख लाग्दो राखेका छन् । सिनेमामा अर्पण थापा र ऋचा शर्माको मुख्य भूमिका रहनेछ ।
अभिनेत्री ऋचा सिंह ठकुरीको निर्माण रहेको सिनेमा ‘सुपर गोर्खे’ पनि अहिले चर्चामा छ । ऋचा र उनका श्रीमान राजले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ‘सुपर गोर्खे’ कमेडी जनरामा बनेको सिनेमा हो ।यस सिनेमाको टिजर केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ ।
सार्वजनिक टिजरमा सुपरम्यान, ब्याटम्यान पछि ‘सुपर गोर्खे’ हेर्ने पालो आएको उल्लेख गरिएको छ । सिनेमाको नामका आधारमा भने वीर गोर्खालीको कथालाई सिनेमाले समेटेको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो सिनेमा मंसिर २९ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
हाँस्यकलाकार सुलेमान शंकर उर्फ इकुको प्रस्तुती सिनेमा ‘फिर्के’ पनि नामका कारण चर्चामा आएको छ । पौष १४ गतेलाई पद्रर्शन मिति तोकेको यस सिनेमामा अर्पण थापा, ऋचा शर्मा, क्रिष्टिना पौडेल, विष्णु सापकोटा, अर्जुन गुरुङ लगायतको मुख्य भूमिका छ । कमेडी जनरामा तयार भएको यो सिनेमालाइ रवि डंगोल ‘का बेइमान’ ले निर्देशन गरेका हुन् ।
नामका कारण चर्चामा रहेको अर्को सिनेमा हो ‘लालपूर्जा’ । निगम श्रेष्ठको निर्माण ‘लालपूर्जा’मा सौगात मल्ल, कामेश्वर चौरासिया, विपिन कार्की, मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ । निगम श्रेष्ठ सिनेमाका निर्देशक हुन् भने माधव वाग्ले र टेकेन खड्का यसका निर्माता ।
गायक तथा अभिनेता सत्यराज आचार्य फोटो पत्रकारको भूमिकामा रहेको सिनेमा ‘साढे सात’प्रदर्शनको लागि तयार भएको छ । २०७२ मा देशले भोगेको नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा रहेर फोटो पत्रकारले भोगेको समस्यालाई सिनेमामा समेटिएको छ । साम्तेन भुटियाको निर्देशनमा तयार भएको यो सिनेमा मंसिर १५ मा प्रदर्शन हुँदैछ ।
सिनेमामा सत्यराजसहित सुनील थापा, मेनुका प्रधान, कामेश्वर चौरासिया, सुप्रिया कटुवाल, शिशिर वाङ्देल, युवराज घिमिरेको मुख्य भूमिका रहेको छ । सिनेमामा निर्देशक भुटियासहित सत्यराज र स्वरूपराज आचार्य, सुनील थापा, नरेशदेव पन्तका साथै डीजे सन्तोष निर्माताका रूपमा रहेका छन् ।
मंसिरको पहिलो साताबाट फ्लोरमा जाने गरी सिनेमा ‘भैरे’ निर्माण हुने भएको छ । एभरेष्ट सूर्य बोहोराको निर्देशनमादयाहाङ राई सिनेमाका मुख्य अभिनेता बन्दै छन् । यो सिनेमाको नाम सुन्दा विशेष एक व्यक्तिको कथामा सिनेमा आधारित हुने बुझिन्छ ।
यम थापाको निर्देशनमा सिनेमा ‘हुर्रे’ पनि निर्माण भइरहेको छ । सिनेमाको नाममा खास दम देखिँदैन तै पनि चाखलाग्दो छ । सिनेमाको कथाले दर्शकलाई पूर्ण मनोरन्जन दिनेमा निर्माता पनि विश्वस्त छन् । केकी अधिकारी, अनुप विक्रम शाही, राजाराम पौड्याल, अंकित खड्का, विजय बराल लगायतका कलाकाहरु यो सिनेमामा अटाएका छन् ।
केही दिन अघि मात्रै निर्माण पक्षले सिनेमाको एउटा पोस्टर सार्वजनिक गरेको थियो जसलाई दर्शकले रुचाएका छन् । सार्वजनिक पोस्टरबाट सिनेमामा अनुप विक्रम शाहीको भूमिका अब्बल रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ऋचा शर्माको निर्माण तथा अभिनय रहेको सिनेमा ‘सुनकेशरी’ पनि नामका कारण चर्चामा छ । भुतप्रेतको कथामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको यस सिनेमामा ऋचाको अवतार केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरियो जसको चौतर्फी चर्चा भयो । यो सिनेमालाई अर्पण थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने ऋचाले भिम न्यौपानेसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेकी हुन् ।
अमित श्रेष्ठको निर्देशनमा सिनेमा नाका पनि तयार भएको छ जसमा विपिन कार्कीले डनको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । केही दिन अघि मात्रै यस सिनेमाको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ जसलाई दर्शकले रुचाएका छन् । अहिले सिनेमाको टिजर ट्रेण्डिङमा छ । टिजर हेरेपछि चौतर्फी विपिनको तारिफ भएको छ । फागुन १७ देखि प्रदर्शनमा आउने सिनेमा ‘नाका’लाई प्रवीन टक्की कार्कीले निर्माण गरेका हुन् ।
रामबाबु गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको सिनेमा ‘मिस्टर झोले’ पुष २८ देखि प्रदर्शन हुँदैछ । दयाहाङ राई, वर्षा राउत, दिया पुन, विजय बराल बुद्धि तामाङ उर्फ हैट लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको ‘मिस्टर झोले’ यस अघिको सिनेमा ‘झोले’को सिक्वेल हो ।‘झोले’लाई दर्शकले रुचएका कारण सिनेमाको सिक्वेल तयार गरिएको हो । तर सिक्वेलको नाममा भने अगाडि मिस्टर थपिएको छ जसले सिनेमाको नाम चाखलाग्दो बनाएको छ ।
मिथिलान्चलको दाइजो प्रथालाई मुख्य विषय बनाएर सिनेमा ‘भोर’ निर्माण भएको छ । विषयवस्तु खुलेपनि सिनेमाको नामले भने धेरैलाई आकर्षण गर्छ । ‘भोर’को अर्थ अँध्यारोबाट उज्यालोरि हुन्छ यसर्थ मिथिलान्चलमा भएको दाईजो प्रथालाई अन्त्य गर्ने सन्देश यस सिनेमाले दिने अड्कल लगाउन सकिन्छ । यो सिनेमालाई ‘झोला’ निर्देशन गरिसकेका निर्देशक यादव कुमार भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् । सिनेमामा ५० प्रतिशत मैथिली र ५० प्रतिशत नेपाली भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
पशुपतिप्रसाद, धनपति जस्ता सिनेमामा काम गरेर लोकप्रिय बनेका अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने यतिबेला सिनेमा ‘डमरुको डण्डिबियो’को काममा व्यस्त छन् । सामान्य नामबाट सिनेमा बनाएर दर्शकको मन जित्ने खगेन्द्रको लेखन तथा अभिनय रहने ‘डमरुको डण्डिबियो’मा पनि केही खास भएको अनुमान छ ।
१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको यो सिनेमा असोजदेखि फ्लोरमा गएको छ । सिनेमामा खगेन्द्रका अलावा मेनुका प्रधान, अनुप बराल, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ । यो सिनेमालाई छेतेन गुरुङले निर्देशन गरिरहेका छन् ।
उज्यालो र gufgaf.com को सहकार्य